Ukulandela Intando KaNkulunkulu | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Wothanda iNKOSI uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke. Lo umyalelo wokuqala futhi omkhulu. Nowesibili uyafana nawo, Wothanda um…
2. Ingabe ubufakazi beqiniso benkolo kuNkulunkulu uma umuntu ethokozela kuphela umusa kaNkulunkulu? Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Uma uthokozela umusa kaNkulunkulu kuphela, unempilo yomndeni enokuthula noma ukubusis…
3. Yini ngempela intando yomuntu olandela uNkulunkulu? Futhi yini ubufakazi beqiniso ngokukholwa kuNkulunkulu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Khona-ke uJobe wasukuma, wabe eseklebhula isiphuku sakhe, futhi waphuca ik…